कोभिडको डरले एक व्यक्ति तीन महिनादेखि विमानस्थलमै लुकेर बसे – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ माघ ६ गते १९:४४
बीबीसी । महामारीका कारण विमान चढ्न डराएका एक पुरुष तीन महिनासम्म शिकागोको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षित भागमा लुकेर बसिरहेको पाइएको अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन्।
कहाँबाट आएका थिए?
प्रहरीका अनुसार सिंह लस एन्जल‍सबाट शिकागोको ओुहेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १९ अक्टोबरमा आइपुगेका थिए। उनले विमानस्थलमा सो ब्याज भेट्टाएको र कोभिडका कारण घर जान डर लागेकाले त्यहीँ बसिरहेको राज्यका सहायक अभियोजनकर्ता केथीलिन हेगर्टीलाई उद्धृत गर्दै शिकागो ट्रिब्यूनले लेखेको छ।
ती व्यक्ति अन्य यात्रुहरूले दिएका खानेकुरामा निर्भर रहेको न्यायाधीशलाई उनले बताइन्। कुक काउन्टीकी न्यायाधीश सुजान ओर्टिजले यो मुद्दाको प्रकृतिबारे आश्चर्य प्रकट गरेकी थिइन्।
‘उसोभए एकजना अनधिकृत व्यक्ति ओ’हेर विमानस्थल टर्मिनल भवनमा १९ अक्टोबर २०२० देखि १६ ज्यानुअरी २०२१ सम्म बसिरहेको र कसैले उनीबारे त्यतिन्जेल थाहा नपाएको भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ? म यसबारे अलि प्रष्ट हुन चाहन्छु,’ न्यायाधीशले अभियोजनकर्तालाई सोधेकी थिइन्।
उनीविरुद्ध विमानस्थलको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा अनधिकृत आपराधिक प्रवेश गरेको अनि चोरी गरेको अभियोग लगाइएका छन्। एक हजार डलर जमानत तिरेर रिहा भएपछि पनि उनलाई त्यसपछि उक्त विमानस्थलमा प्रवेश दिइनेछैन। ‘अदालतसामु प्रस्तुत गरिएका तथ्य र बयान निकै स्तब्ध पार्ने खालका छन्,’ न्यायाधीश ओर्टिजले भनिन्।
‘विमानस्थलहरू भनेको अत्यन्त सुरक्षित हुनुपर्छ ताकि मानिसहरू विना कुनै चिन्ता यात्रा गर्न सकून्। तर यी आरोपित कार्यहरूले उनी समुदायको निम्ति खतरनाक देखिन्छन्।’